China Piri-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner nePepa Rukoko fekitari uye bhizimisi | 品牌 名 / 公司 名
Maviri-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner nePepa Rukoko
Iyi liner inoumbwa nealuminium foil layer uye backup layer. Inoda iyo induction chisimbiso muchina. Mushure mekudzoreredzwa muchina unopa kupisa-chisimbiso laminate hermetically chisimbiso kumuromo wemudziyo, aruminiyamu rukoko rwakanamirwa pamuromo wemudziyo uye yechipiri dara (kadhibhodhi yefomu) yasara mune kapu. Iyo yechipiri liner se reseal liner yasara mu cap mushure mekupisa maitiro.
Mbishi zvinhu: Kutsigira Chinyorwa + Wax + Pepa Rukoko + Aluminium Foil + Plastiki Firimu + Kuisa Mufirimu Firimu
Kutsigira Zvinyorwa: Pulp bhodhi kana Yakawedzerwa Polyethylene (EPE)
Simbiso rukoko: PS, PP, PET, EVOH kana Pe
Hurefu Ukobvu: 0.2-1.7mm
Dhayamita Yakajairwa: 9-182mm
Isu tinobvuma yakagadzirirwa logo, saizi, kurongedza uye graphic.
Zvigadzirwa zvedu zvinogona kufa-kutemwa muzvimiro zvakasiyana uye hukuru pakukumbira.
Kupisa kwekuisa chisimbiso: 180 ℃ -250 ℃, zvinoenderana nezvinhu zvemukombe uye nharaunda.
Pasuru: Mapurasitiki mabhegi - mapepa makatoni - pallet
MOQ: zvidimbu 10,000
Nguva yekuendesa: Kukurumidza kutumira, mukati memazuva gumi nemashanu kusvika makumi matatu zvinoenderana nehurongwa hwakawanda uye kurongeka kwekugadzira.
Kubhadhara: T / T Telegraphic Transfer kana L / C Tsamba Yechikwereti
Iyo aruminiyamu dura yakavharirwa pamuromo wemudziyo.
Chikamu chechipiri (kadhibhodhi yefomu) chasara mukaputi.
Dhinda mapatani kana marondera pane yemukati pepa rukoko
Inokodzera iyo screw capping PET, PP, PS, PE, yakakwira chipinganidzo mabhodhoro epurasitiki
Kuchengeta kwakanaka kwekushisa.
Hupamhi hwekupisa simbi tembiricha renji.
Yakakwira mhando, isina-kuvuza, anti-ponji, yakachena yakachena, yakapusa & yakasimba sealing.
Chipingamupinyi chemhepo uye hunyoro.
Yakareba garandi nguva.
1- Mota, Injini, uye Mafuta ekuzora Mafuta
2- Zvinodyiwa Oiri zvigadzirwa
3- Zvigadzirwa zvemishonga (Mafekitori emishonga yeMapiritsi, Gel, Kirimu, Poda, Liquid, nezvimwewo)
4- Zvigadzirwa Zvekudya.
5- Zvinwiwa, Muto Wezvibereko, Butter, Huchi, Mineral Mvura
6- mishonga yezvipembenene, fotereza, uye Makemikari
• Nutraceutical Zvigadzirwa
Kudya & Zvinwiwa
• Mafuta ekuzora
Zvinhu Zvinokanganisa Kuiswa Simbiso
Bata upamhi hwekuisa chisimbiso pamusoro: iyo yakakura iyo yekudyara upamhi pakati pekuisa chisimbiso pamusoro uye gasket kana kurongedza, iyo yakareba iyo nzira yekuyerera kwemvura uye yakakura kuyerera kwekuramba kurasikirwa, izvo zvinobatsira pakuisa chisimbiso. Nekudaro, pasi pesimba rimwechete rekumanikidza, iro rakakura rehupamhi hwehukama, idiki iro rakamanikidzwa. Naizvozvo, iyo yakafanira nzvimbo yekutaurirana inofanirwa kuwanikwa zvinoenderana nezvinhu zvechisimbiso.
Fluid tembiricha: iyo tembiricha inokanganisa iyo viscosity yemvura, nekudaro ichikanganisa iko kuita kwekuvhara. Nekuwedzera kwekushisa, iyo viscosity yemvura inoderera uye iyo viscosity yegasi inowedzera. Kune rimwe divi, shanduko yetembiricha inowanzo kutungamira mukushomeka kwezvinhu zvekuisa chisimbiso uye zviri nyore kukonzera kuvuza.
Pashure: Mbiri-Chikamu Kupisa Induction Seal Liner Iine "A Dhizaini"
Zvadaro: Glue Seal
Nyore Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner
Chimwe-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner ine Kutsigira
Imwe-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner neWhite ...
Simudza 'N' Peel
Mbiri-Piri Yekupisa Induction Seal Liner ne "...
Imwe-chidimbu Kupisa Induction Seal Liner ine Yemukati ...